Dagaal ka dhex-qarxay laba dal oo deris la ah Turkey iyo Ankara oo wacad ku martay inay galeyso | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Dagaal ka dhex-qarxay laba dal oo deris la ah Turkey iyo Ankara...
Armenia iyo Azerbaijan ayaa isku diyaarinaya dagaal weyn kadib markii iska horimaad culus uu ka dhex qarxay milatariga Azerbaijan iyo koox gooni u goosato reer Armenia ah, kaasi oo horseeday khasaare nafeed oo shacab iyo militari ah oo soo gaaray labada dhinac.
Waa isku dhacii ugu xumaa ee tan iyo 2016 dhex mara Azerbaijan iyo Armenia oo uu uu ka dhaxeyeo muran dhuleed salka ku haya gobolka Nagorny Karabakh.
Gobolka Nagorny Karabakh waxa uu caalamka u aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, hase yeeshee waxaa degan dad Armenian ah oo doonaya inay goostaan, waxaana taageera Armenia.
Khudbad uu shacabka uga jeediyey taleefishinka ayaa madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev waxa uu wacad ku maray inuu guul ka gaari doono ciidamada Armenia.
“Qadiyaddeena waa mid cadaalad ah waana guuleysan doonnaa,” ayuu yiri isaga oo adeegsanaya oraah caan ah oo laga soo xigtay kaligii taliyihii Midowga Soviet Joseph Stalin, oo uu jeediyey bilowdii dagaalkii labaad ee adduunka.
“Ciidamada Azarbaijain waxay u dagaalamayaan dhulkooda,” ayuu yiri.
Armenia iyo gobolka gooni u goosadka ah ee Nagorny Karabakh ayaa labadaba soo rogay xukun militari waxayna amreen in ciidamada ay diyaar garoobaan.
“U diyaar garooba inaad difaacdaan dhulkeena barakeysan,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan oo qoraal soo dhigay facebook.
Hoggaamiyaha gobolka Karabakh Araik Harutyunyan ayaa sheegay inuu soo rogay xukun militari, uuna amray in qof kasta oo caafimaad qaba uu isu diyaarinayo adeeg militari.
Armenia ayaa goor sii horreysay sheegtay in Azerbaijani ay soo weerareen deegaano ay degan yihiin shacab, ayna ku dileen haween iyo carruur.
Wasaaradda gaashaandhigga Azerbaijan ayaa sheegtay inay billowday ‘weerar ka hortagis ah oo ay isaga caabineyso dhaq-dhaqaaqyada dagaal ee Armenia, kuna xaqiijineyso bad-baadada shacabka.”
Turkiga oo xulufo la ah Azerbaijan ayaa ku eedeeyey Armenia inay dagaalka billaabeen, wuxuuna wacad ku maray inuu taageero buuxda siinayoBaku.
“Waxaan si xooggan u cambaareeneynaa weerarka Armenia ay ku qaaday Azerbaijan,” waxaa sidaas yiri Ibrahim Kalin, oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
“Armenia waxa ay jebisay xabad-joojinta ayada oo weerartay goobo ay ku nool yihiin dad shacab ah,” ayuu yiri.
“Azerbaijan waxay xuquuqda ay u leedahay inay is-difacado u adeegsan doontaa inay bad-baadiso shacabkeeda iyo sharafteeda dhuleed. Inta hanaankan uu socdana, taageerada Turkey ee Azerbaijan waa mid adag, haddii Azerbaijan ay naga dooneyso taageero waan taageri doonnaa,” waxaa sida isna bayaan uu soo saaray ku yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibedda Turkiga Hami Aksoy.